News | Tag: malaysia
मलेसियाका नयाँ प्रधानमन्त्री मोहिउद्दीन यासिनद्वारा शपथ
एजेन्सी । मलेसियामा पूर्व गृहमन्त्री मोहिइद्दीन यासिनले आइतबार प्रधानमन्त्री पदको शपथ लिएका छन् । चौरानब्बे वर्षीय प्रधानमन्त्री महाथिर मोहम्मदको सुधारवादी सरकारको पतन भएसँगै चौतर्फी भ्रष्टाचार र घोटालामा नाम जोडिएको शक्तिको पुनः उदय भएको छ । पूर्व प्रधानमन्त्री महाथिरले वर्तमान सरकारको गठन अवैधानिक रहेको दाबी गरेका छन् ।
काठमाडौँ । शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेल कतारमा जारी ‘वल्ड इनोभेशन समिट फर एजुकेशन’ मा सहभागी कतार र मलेसियाका शिक्षामन्त्रीसँग भेटावार्ता गरेका छन् ।
मलेसिया जाँदा कुन कुन विशेष ठाउँ घुम्ने ?
एजेन्सी । पछिल्लो समय मलेसिया घुम्न जानेहरुको संख्या बढिरहेको छ । मलेसिया सरकारले पनि पयर्टन क्षेत्रमा खर्बौ लगानी गरिराखेको छ । वर्षेनी करोडौँको संख्यामा पयर्टकहरु मलेसिया रम्न जाने गरेका छन् ।
क्वालालम्पुर । मलेसियाको उच्च अदालतले त्यहाँका पूर्व प्रधानमन्त्री नजिब रजाकको भ्रष्टाचारसम्बन्धी मुद्दाको सुनुवाई एक साताका लागि स्थगित गरेको छ ।
क्वालालम्पुर । चीनको आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोगमा निर्माण हुन लागेको रेल परियोजना बिहीबारदेखि पुनः शुरु भएको छ । मलेसियाका प्रधानमन्त्री महाथिर मोहम्मदले उक्त परियोजनामा भ्रष्टाचार भएको र मुलुक ऋणको चपेटामा पर्ने भन्दै ६४० किलोमिटर लामो यो रेल परियोजना स्थगित गरेका थिए ।
फुटबलप्रेमी राजाको निधन
क्वालालमपुर । मलेसियाका सातौँ राजा तथा प्रसिद्ध फुटबल खेलाडी सुल्तान अहमद शाहको बुधबार निधन भएको छ । उनको ८८ बर्षको उमेरमा निधन भएको अधिकारीहरुले पुष्टी गरेका छन् । पाहाङ राज्यबाट उनी केन्द्रीय राजा बनेका हुन् । पाहाङ राज्यको भने उनी पाँचौँ राजा थिए ।
मलेसिया जाँदै हुनुहुन्छ ? यी १० सुन्दर ठाउँहरु अवश्य घुम्नुहोस्
काठमाडौँ । थाइल्याण्डमा जारी एसीसी यू–१६ इस्टन रिजन क्रिकेट प्रतियोगितामा नेपालले मलेसियालाई २९ रनले पराजित गरेको छ ।
मलेसिया जान चार दिनमा ६४ ले लिए श्रम स्वीकृति
काठमाडौँ । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले कलिङ भिसामार्फत मलेशिया जाने कामदारका श्रम स्वीकृति खुला गरेपछि चार दिनमा ६४ ले श्रम कार्यालय ताहाचलबाट स्वीकृति लिएका छन् । सरकारले यही चैत १७ गतेदेखि खुला गरेपनि कार्यालयले भने २५ गतेबाट श्रम स्वीकृति दिन थालेको कार्यालयका महानिर्देशक देवेन्द्र कार्कीले जानकारी दिए ।
मलेसियामा बस दुर्घटना हुँदा दुई नेपालीसहित ११ जनाको मृत्यु
क्वालालम्पुर, मलेसिया । कार्गो कम्पनीमा काम गर्ने श्रमिकहरु चढेको बस दुर्घटना हुँदा दुई नेपालीसहित ११ जनाको मृत्यु भएको छ ।